ग‌ंगामायालाई भेट्न पनि तीन सा‌ंसद जाने – Letang Khabar
ग‌ंगामायालाई भेट्न पनि तीन सा‌ंसद जाने
काठमाडौं ,२० असार। नेपाली कांग्रेसले डा. गोविन्द केसीको अनशनको अवलोकन गर्न तीन सांसदलाई जुम्ला पठाउने भएको छ । बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले सांसदहरु प्रकाश रसाइली स्नेही, रंगमति शाही र दिनवन्धु श्रेष्ठलाई जुम्ला पठाउने निर्णय गरेको हो ।
उनीहरुले डा. गोविन्द केसीको अनशनमा ऐक्यवद्धता जनाउने र उनको अवस्थाबारे जानकारी लिने प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले जानकारी दिए । उनीहरु बिहीबार विहान त्यसतर्फ जानेछन् ।